सन्दर्भः नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ -देबेन्द्र कार्की oorvaaaachal विकास क्षेत्रमा अवस्थित धरान नेपालकै एक सुन्दर तथा विविध सांस्कृतिक विविधत...
जन्म गाँउलाई अखवारी माया
यात्रा संस्मरण देबेन्द्र कार्की डाडापखापोखरीका वन बाटीकाहरु गुरासे रंङ्गमा मेरै स्वागतमा बाटोमा आखा विछयाइरहेकिछिन् भन्ने भान मलाई लागि...
पूर्वको पर्यटनग्राम भेडेटार
देवेन्द्र कार्की debendrak@gmail.com सेताम्मे हिउ फूल्ने काचनजंघा र मकालु हिमालको काखमा लमतन्न परेको धनकुटा बजार र दक्षिणमा चारकोशे झ...
अनुकरण गर्दा कसो होला ?
संस्मरण -देबेन्द्र कार्की नेपालबाहिर भारतको वीरपुरसम्ममात्र पुगेको थिएँ । भारतको अन्य थप शहर घुम्ने चाहना लामो समयदेखिको हो । नभन्दै ग...
चिया पसलबाट गुजरा
देबेन्द्र कार्की / तराईमा गर्मी बढ्दो छ । मान्छे घाम र आगोको तापबाट टाढा बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर उच्च ठाउँ तथा छहारी खोज्दै भौंतारिरहेका छन्...
देवेन्द्र कार्की खोटाङ जिल्लाको दोश्रो प्रमुख व्यापारी केन्द्र चिसापानी गाविसको पर्यटन प्रर्वद्धन एवं त्यहाँको विकास निर्माणको गतिलाई जनम...
कागजमा सीमित नमुना शहर
–देबेन्द्र कार्की मुलुककै सबैभन्दा बढी ११४ गाविस भएको सप्तरी जिल्लामा अवस्थित नमुना गाविस फत्तेपुर जिल्लाका ४ नमुना गाविसमध्ये एक पर्छ । ...
डर लाग्दो प्राकृतिक प्रकोप–चट्याङ
देबेन्द्र कार्की विश्वमै भूकम्प, भूक्षय, बाढी वा दुर्घटनालाई प्राकृतिक विपत्तिको रुपमा निकै महत्वको साथ हेरिने गरिन्छ । तर मानिस, जनावर...
गाउँ घरमा दशै
-देवेन्द्र कार्की भीडभाड कोलाहल चहलपहलले भरिएको शहरहरु दशैको फूलपाति अघिनै रित्तो भयो । शहरबाट एकाएक हराएका मानिसहरुको भीड फूलपातप् द...
सुसासनमा धरान नगरपालिका
देबेन्द्र कार्की/धरान ‘नागरिक सचेतना केन्द्रले हाम्रो आाखा खुलाएको छ । आफ्ना अधिकार खोज्न सक्ने भएका छौ ।’ समस्याबारे हप्तामा २ घण्टा...
Debendra Karki @. Powered by Blogger.
गाउँघरमा दशैको रौनक
भीडभाड र कोलाहलले भरिएका शहरहरू यति बेला लगभग रित्ता छन् । उपत्यका यति बेला फराकिलो बनेको छ । मुलुकका अन्य शहरहरू पनि क्रमशः रित्तिँदैछन् । शहरबाट एकाएक हराएका मानिसहरूको भीड गाउँमा देखिएको छ । दशैँको पूmलपातीअघि नै गाउँ भरिएको छ । शहरलाई शून्य बनाएर सबै मानिस गाउँमा शाखा–सन्तानको उपस्थितिले घरहरू निकै उज्याला र भरिभराउ भएछन् । छरछिमेक, इष्टमित्र, आफन्त र घरपरिवारसँग भेटघाट गर्ने बहाना बनेको दशैँको रौनक गाउँमै छ । नजिकको दुर्गा भगवती मन्दिर, गाउँलेहरूले निर्माण गरेको दुर्गा पूजा स्थलमा नेपाली, हिन्दी गाना तथा भजनले गुञ्जायमान छन् । नौरथादेखि नै बिहान ४ बजे नै हार्मनीको भैरवी रागसहितको भजन–कीर्तनको ध्वनिले सबै गाउँले झिसमिसेमा ब्युँझन्छन् । यहाँका एकसे एक गायक–वादकहरूले झुमीझुमी भक्तिरसका भाका ओकल्दा माहौल नै अर्कै बनेको छ । नौरथाभरि भजन–कीर्तन र मेलाले गाउँ रोमाञ्चक बनेको छ ।
आहा ! भेडेटार
भ्यु टावरबाट देखिएको भेडेटार बजार ।
भेडेटारको उचाइमा रहेको भ्यु टावर ।
भेडेटार बजारबाट २ किमी तल उत्तरतर्फ रहेको नमस्ते झरना ।
धरान / शिरमा सेताम्मे हिउँ फुल्ने कञ्चनजंघा र मकालु हिमाल, काखमा सुतिरहेछ, पूर्वकै नमुना सहर धनकुटा । हो, पूर्वको रमणीय पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित छ, भेडेटार ।
यहाँ बाह्रैमास आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भीड लाग्छन् । आधा भूभाग धरान र आधा धनकुटाको स्वामित्वमा रहेको भेडेटार भूगोल, मौसम र आसपासका अन्य पर्यटकीय स्थलका कारण चर्चित छ ।
ब्यवस्थित बसोवासको उदाउँदो शहर धरान
पूर्वको पर्यटकीय शहर धरानको इतिहास खोज्दै जाँदा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेर राणासम्म पुग्छ । सन् १९५८ सालमा चन्द्रपुर बजार (हालको पुरानो बजार) बसालेर धरान सहरको बस्ती बसाएको इतिहास छ । इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई काठ आपूर्ति गर्न धरान हालेर चारकोसे जंगल फँडानी गरिएकाले यस ठाउँको नाम धरान रहेको हो । १९९० सालको भूकम्पपछि अर्का राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरले हालको नयाँ बजार भनिने जुद्धनगर बसाए । २०१० सालमा ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस गोर्खा सैनिक कार्यालय स्थापना गरेपछि पूर्वी पहाडी जिल्लाको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा धरानको विकास भएको हो । गोर्खा शैनिकका ेकार्यलय स्थापनाले धरानलाई पूर्वी पहाडी जिल्लाको नाकाको रुपमा विकसित गरेको पाईन्छ ।
१६ औ सताब्दीमा किरात प्रदेशको राजधानी
धरानको इतिहास सौह्रौँ शताब्दीतिरको विजयपुरसँग पनि जोडिन्छ । यति बेलाको वियपुर धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रुपमा विकसित भएको छ । स्थानिय बुढापाकाका अनुसार पाल्पाका सेनवंशी राजाले विजयपुर गढीलाई सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण किल्ला बनाएका थिए । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले १८३१ सालमा सम्झौता गरेर नेपालमा गाभ्नुअघि विजयपुर किरात प्रदेशको राजधानी थियो। त्यही विजयपुरगढी धरानको शिरका रुपमा रहेको छ ।
हालको आधुनिक धरान सहर रहेको स्थानमा सुरुमा घना जङ्गल रहेको र सो जङ्गल फँडानीका क्रममा काठ चिर्ने आरावालाहरुले तयार गर्ने गरेको धरान (धराप) बाट नै आजको धरान सहरको नामकरण भएको भन्ने भनाई छ ।
वि.स. १९५० तिर घना जङ्गल फँडानी गरेर सानो बस्तीबाट सुरुवात भएको धरान, वि.स. १९५९ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शमशेरले चन्द्रनगर (हाल पुरानो बजार) र वि.स. १९९० तिर श्री ३ जुद्ध शमशेरले जुद्ध नगर (हालको नयाँबजार) बसालेको इतिहासमा पाइन्छ ।
/, , , ToP